Madaxweyne Farmaajo oo shacabka ugu baaqay la shaqaynta laamaha ammaanka | Dhacdo
Home Wararka Maanta Madaxweyne Farmaajo oo shacabka ugu baaqay la shaqaynta laamaha ammaanka
Madaxweynaha Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda, Maxamed Xuseen Rooble ayaa cambaareeyay weerarka ismiidaaminta ee ka dhacay afaafka hore ee Saldhigga Booliska ee Degmada Waaberi.
Madaxweyne Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay isku duubni iyo wadajir, si looga guuleysto cadowga caadeystay gumaadka iyo daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed.
“Innaa Lillaahi wa innaa Ilayhi raajicuun. Waxaan ka tacsiyeynayaa geerida Taliyihii Booliiska Degmada Waaberi, Gaashaanle Axmed Sheekh Cabdullaahi Baashane, Saraakiisha iyo askarta kale ee Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ee u shahiiday iyagoo ka shaqaynaya amniga dalkooda iyo dadkooda. Dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo hay’adaha amniga waxaan ugu baaqayaa in si wadajir ah ay isaga kaashadaan ka hortagga dhagarta arxan-darrada ah ee argagixisada.” Ayuu yiri Madaxweynaha oo warkan ku sheegay qoraal ka soo baxay Villa Somalia.
Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa isna qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay ku cambaareeyay ismiidaamintaasi, isagoo dhanka kalena tacsi u diray qoysaska ay ka baxeen dadkii ku naf waayay falkaasi.
“Waxaan cambaareynayaa weerarkii argagixisadu ku qaadeen Saldhigga Degmada Waaberi. Waxaan qoysaskoodii iyo shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyeynayaa Saraakiishii iyo shacabkii ku naf waayay falkaas argagixiso. Inta dhimatay Allaha u naxariisto, dhaawacyadana Allaha bogsiiyo.” Ayuu yiri Rooble.
Sadiiq Aadan Cali (Doodisho), Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa Warbaahinta u sheegay in lix qof ku dhimatay qaraxaasi, halka lix kalena ay ku dhaawacantay.
Ma jirto cid sheegatay masuuliyadda qaraxaasi, hase yeeshee waxaa lala xiriirinaya maleeshiyada Al Shabaab.
Previous articleFaah faahin: Ismiidaamin caawa ka dhacday Magaalada Muqdisho
Next articleDowladda oo digniin ka soo saartay keenista qaadka Kenya